Mahavariana ireo mpandinika sy ny mpakafy ny vorona ny Spiny Babbler, ilay vorona tsy hita afa-tsy ao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2019 6:56 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, русский, Español, Yorùbá, Português, नेपाली, Deutsch, Français, 日本語, English
Spiny Babbler, ilay vorona tsy misy afatsy any Nepal. Saripikan'i Sagar Giri. Nahazoana alalana.
Na dia mihoatra ny 800 aza ny karazam-borona hita any Nepal dia ny Spiny Babbler ( Turdoides nipalensis ) no hany vorona tsy hita afa-sy ao amin'ity firenena ity. Miaina any anaty kirihitr'ala matevina ilay vorona somary miloko volondavenona sy volon-tsôkôla , antsoina hoe Kaande Bhyakur amin'ny Nepaley ary tazana mora kokoa amin'ny haavo 500 metatra ka hatramin'ny 2.135 metatra. Mandrahona ity karazam-borona Spiny Babbler tsy manam-paharoa izay tena ankafizina ity ny fahasimban'ny tontolo iainana na dia nahavariana ny mpandinika ny vorona eto amin'izao tontolo izao nandritra ny taona maro aza ity vorona ity.
Manana karazam-borona miisa 876 i Nepal, tsy manan-tsahala ny 1 (Spiny Babbler) amin'izany
Miafinafina any anaty natiora ity vorona somary kelikely ity ary sarotra ny mahita azy ireo, raha tsy amin'ny fiandohan'ny fotoam-panarahana rehefa mihira matetika eny ankalamanjana ny vorona lahy.
Hitanay ihany nony farany ny Spiny Babbler, vorona izay tsy hita afa-tsy any Nepal !
Misioka feo samihafa somary mafy sy milantolanto rehefa misiotsioka tsy mitsahatra izy ireo avy any amin'ny toerana miafina misy azy ao anatin'ireo kirihitra matevina izay manakoako manerana ny havoana tsy lavitra eo ka manaitra anao ny fahafahana hahita azy ireo. Na izany aza, toa mihena ny fahenoana izany mandritra ny ririnina.
Ny lohataona sy ny fahavaratra no tena fotoana tsara indrindra hijerena ity vorona hafakely ity izay hita any amin'ny toerana vitsivitsy ihany any Nepal. Hany ka mampanontany tena ny olona sasany hoe nahoana no nahatonga ireo vorona ireo hijanona ao amin'ity faritra ara-jeografika sy politika ity . Misaotra an'i Tharu_hunk sy Nikita Khamparia noho ny fanampian'izy ireo.
Siotsiokan'ny Spiny babbler (Turdoides nipalensis), ilay hany vorona fantatra hatramin'izao fa tsy manan-tsahala ao Nepal .
Nilaza ny boky The Status of Nepal’s Birds: The National Red List Series (Ny mombamomba ireo vorona any Nepal, ny andiana lisitra mena nasionaly) hoe:
Mitady bibikely izy ireo amin'ny ankapobeny ao amin'ny tany ambanin'ny kirihitra ary tsindraindray ihany no miseho. Mihanika ny sampan'ny kirihitra na ny hazo bitika ny Spiny Babbler rehefa hisiotsioka, manondro ambony iny vavany iny ary midina ambany ny rambony. Tena mahay mangala-tahaka izy , miaraka amin'ny hikan'ny sioka, toy ny mihomehy ao anatin'ny hafaliana. Mora ny mahita azy amin'ny alalan'ny siokany ary misioka tsindraindray hatramin'ny volana Septambra sy Oktobra izy ireo. Miankina amin'ny fiovaovan'ny vanimpotoan'ny toetr'andro ny fiainan'ity karazam-borona ity.
Nahaliana ireo mpandinika ny vorona sy ireo mpankafy vorona manerana izao tontolo izao ny Spiny Babbler, izay tsy hita afatsy any Nepal. Nosoratan'i Don Messerschmidt ny fitantaran'i S. Dillon Ripley ilay mpandinika momba ny vorona ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe Mikaroka Spiny Babbler :
“Nihaika ny mpahay siansa nandritra ny taona maro, nanomboka tamin'ny taona 1843 na 1844 ity karazam-borona ity. Tamin'izany fotoana izany, niaro ny karazany maromaro ireo mpanangona karazam-biby Nepaley niasa tao amin'i Brian Hodgson tao amin'ny faritra lehibe tsy fantatra anarana tao Nepal ,” hoy izy nanoratra. Mbola mijanona ho misitery hatramin'izao ny “Spiny Babbler , iray tamin'ireo karazam-borona Indiana dimy, izay toa nanjavona teto an-tany niaraka tamin'ny Papelika An-tendrombohitra.” Saingy tsy izany loatra raha tsy diso ny eritreritro fa indro izy hitako mahavelom-panantenana be eo an-tehezan'ny tendrombohitra feno ala eo ambonin'ny Rekcha. “
Tahaka izany ihany koa, nandany taona maro niezaka nitady sy naka sary an'ity vorona ity ilay ambasadaoro Amerikana teo aloha tany Nepal, Scott DeLisi .
Nisioka ilay mpandinika ny vorona David Walsh hoe:
Nanao dia lavitra tamin'ny fiara niala tany Kathmandu nankany Chitwan omaly ny vondrona Ornitholidays. Ny hijery ny Spiny Babbler, ilay vorona tokana hany tsy manan-tsahala ao Nepal no tanjona.
Tandindonin-doza ilay vorona noho ny fanalana ny kirihitr'ala hanaovana fambolena sy ny fanitarana ny faritra an-tanàndehibe. Tandindonin-doza amin'ny fihazana izy ireo matetika any ivelan'ny faritra voaaro, ary nahitana fihenana ny isan'ny Spiny Babbler any amin'ireo havoana manodidina ny Lohasahan'i Kathmandu. Mety hiteraka fahasimbana vaovao hafa anefa ny tsy fisian'ny toerana izay manimba ny fonenan'ny Spiny Babbler any amin'ny faritra sasany. Vao foronina ny faritra feno kirihitra izay antsoin'izy ireo hoe fonenana satria mitohy miha-manify ny ala noho ny fitrandrahana ala manerana ny firenena. Saingy ny fotoana ihany no hilaza izay hoavin'ity hany vorona tsy manan-tsahala avy ao Nepal ity.